Naing's Diary: မြန်မာ သီချင်းစာသားများ
သိသမျှ၊ ဖတ်မိသမျှ ကို ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်...။ ပညာရှင် မဟုတ်ပါ ခင်ဗျာ...။
..........တစ်ခါ တစ်ခေါက် ထပ်ပြီး လာလည်ပါအုံးလို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ.............
:::Window XP & 7:::
:::VIRUS & ME:::
မြန်မာသီချင်းတွေကို နားထောင်ဘူးတယ်... စာသားမရှိဘူးပေါ့..ကိုယ်တိုင်ဂစ်တာလေးတီးပြီး ဆိုချင်တဲ့အခါ စာသားတွေကို
ခက်ခက်ခဲခဲအခွေပြန်ရှာ၊ ပြန်ဖွင့်ပြီး ကူးနေစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ အဝေးရောက် မြန်မာများအတွက်လည်း သီချင်းစာအုပ် တွေ ခက်ခဲစွာ မရှာရတော့ဘူးပေါ့၊ မြန်မာသီချင်းများစွာကို စာသားတွေ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခု ပေးလိုက်မယ်နော်။ www.mmlyrics.com တဲ့...ဒီ ဆိုဒ်မှာ Male Artists, Female Artists, Group Artists, Various Artists ဆိုပြီးတော့ သေသေချာချာ label လေးတွေခွဲပြီးဖော်ပြထားပါတယ်.. ရှာဖွေရတာလဲ လွယ်ကူပါတယ်။
thar lay February 13, 2013 at 1:25 AM
abc opi July 28, 2013 at 2:23 PM
Koko Chit December 31, 2013 at 4:23 PM
Get Myanmar fonts ၁။zawgyi to Unicode Converter ၂။myanmar3 Unicode ၃။www.zawgyi.net
ဒီမှာ အကုန်ရှိတယ်.... ၁။www.filehippo.com ၂။Nninite.com ၃။download.cnet.com ၄။softpedia.com ၅။www.freewarefiles.com ၆။www.brothersoft.com ၅။katz.cd
Blog နှင့် IT နည်းပညာများ ၁။kp3family ၂။MyanmarITresource ၃။Nay Min Maung ၄။Technical-Seven ၅။MZ Education ၆။myanmar-technicians ၇။ချယ်ရီမြေ ၈။nnyioo ၉။kozaw357 ၁၀။ပျူနိုင်ငံ ၁၁။Yan Aung ၁၂။မာ့ခ်၏ ကိုယ်​ပိုင် အတ္တများ ၁၃။Saturngod ၁၄။ကောင်လေးငယ် ၁၅။သံလုံငယ် ၁၆။ညီနေမင်း ၁၇။အိုင်တီခရီးသည် ၁၈။ချယ်ရီမြို့တော် နည်းပညာများ ၁၉။မောင်စေတနာ ၂၀။မောင်ပညာ ၂၁။မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့ ၂၂။မိုးထက်မြင့် ၂၃။စံပီး ၂၄။ကိုမောင်လှ ၂၅။ ကိုမြတ် ၂၆။sharingtofriends ၂၇။NyiLynnSeck ၂၈။Myanmar IT Development ၂၉။MyanmarIT Pro ၃၀။zeroway ၃၁။ ဖိုးသား ၃၂။ခေတ်ပညာ ၃၃။htootayzar ၃၄။Knowledge is Free
ဘောလုံးသတင်းများ ၁။soccermyanmar ၂။MyanmarGoal ၃။mutdfan ၄။chelseafan ၅။YangonUnited ၆။M-nationalleague ၇။EPLeague ၈။Livescore 9။BBC football
Online Dictionary ၁။Translator ၂။All-Channel ၃။English>>Myanmar>>English
Entertainment ၁။အင်းဝ ၂။myanmarmp3album ၃။Myanmarsongs.net ၄။Pansagar ၅။အိမ်မက်လှိုင်း ၆။Flashband ၆။အဖြူရောင်သံစဉ် ၇။ရင်ခုန်သံFM ၈။Myanmarmp3 ၉။FreeMyanmarVCD ၁၀။MYMClub ၁၁။Dhamma-TV ၁၀။Burmeseclassic ၁၁။myitzuri.com
အခြား စာမျက်နှာများ ၁။Freedomnewsgroup ၂။Irrawaddy ၃။Mizzima ၄။BBC ၅။VOA ၆။News-Eleven ၇။M-Wikileaks ၈။Dr-LunSwe 9။Myanmartimes 10။Naytthit 11။Yoma3 12။Mongloi 13။yourmyanmar
Zawgyi font and Myanmar3
My Page (3)
Other Knowledge (5)
Virus Problems (15)
casino | CASINOLASVEGAS | ONLINE CASINO NEWS | Soccer | Betsson Poker
Display Properties Box ကို ပိတ်ထာခြင်း...။
Desktop Tab ကို ဖျောက်ထားခြင်း...။
Themes Tab နှင့် Appearance Tab ကိုဖျောက်ခြင်း...။...
Screen Saver Tab ကို ဖျောက်ထားခြင်း...။
MAGWAY FC ( MGY ) Virusရှင်းလင်းပုံနှင့်ကာကွယ်ရန်
Files size ကြီးကြီးတွေ ပို့မယ်ဆိုရင်....
Notepad မှာ မြန်မာလို ပေါ်အောင်.....။
တစ်ချို့ ဆိုဒ်တွေမှာ Right Click Disable လုပ်ထားသေ...
Desktop မှာရှိတဲ့ Icons လေးတွေမှာရှိတဲ့ Arrow လေးေ...
Website လမ်းညွှန် (၂)
မိမိ Blog မှာ Menu Tab လုပ်နည်း.....။
မိမိ Blog Tamplate ကို ချဲ့ခြင်း...။
မိမိ Blog မှာ Calendar ထည့် ခြင်း.....။
မိမိ Blog မှာ နာရီလှလှလေးထဲ့မယ်ဆိုရင်.....။
Blog အတွက် Menus,Texts, Banner, Bottons, Clocks မျ...
မိမိနှစ်သက်သည့် Blog သို့ သွားစရာမလိုတော့.....
မိမိ Blog မှ Subscribe to : Posts (Atom) ကို ဖြုတ်...
Registry Editor ကိုပိတ်ထားခြင်း...။
Folder / icon တွေကို မိမိနှစ်သက်တဲ့နာမည်ပြောင်းခြင...
Windows XP မှာ start နဲ့ shutdown မြန်အောင်လုပ်ခြင...
မိမိ ရဲ့ နာမည် နဲ့ Logo လုပ်ခြင်း နှင့် ပုံလှလှလေး...
Windows_Installation E-book (မြန်မာ)
CD Drive ပျောက်နေခြင်း
ကိုစိုးမင်းရဲ့ EOT for font
သင့်ရဲ့Blogspot မှာ မြန်မာလို ရေးရတာ အဆင်ပြေအောင်....
Window မှာ R-Click ကို ပိတ်ခြင်း။
မြန်မာသီချင်းတွေကို နားထောင်ဘူးတယ်... စာသားမရှိဘူးပေါ့..ကိုယ်တိုင်ဂစ်တာလေးတီးပြီး ဆိုချင်တဲ့အခါ စာသားတွေကို ခက်ခက်ခဲခဲအခွေပြန်ရှာ၊ ပြန်ဖွင်...
သူသာရှိနေရင် ဒို့တွေ ဒီလိုမနေရဘူး ဖေဖော်ဝါရီ တစ်ဆယ့်သုံးမှာ ... ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ပါ ... တစ်ထောင့်ကိုးရာ တစ်ဆယ့်ငါး ... ရှေ့နေဦးဖ...
Web Design နှင့် Graphic Design တို့၏ ကွာခြားချက်များ.....။
ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် ရောထွေးလွန်းတတ်တဲ့ Web Design နဲ့ Graphic Design အကြောင်းကို အနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနားလည်ထားကြတာကတော့ ...
WEFT နဲ့ EOT လုပ်ရတာကို တချို့က နားမလည်ကြဘူးဗျ..။ ကျွန်တော်လည်း အခုထိ WEFT နဲ့ လုပ်တာ အဆင်မပြေဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ နီးစပ်ရာ အကူအညီတောင်းလိုက်တော့ က...
တစ်လောက မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒကာမကြီးတစ်ယောက် ကျောင်းကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒကာမကြီးရောက်တဲ့ အချိန်နဲ့ ဆွမ်းစားချိန်တိုးနေတဲ့အတွက် ဆွမ်းဝိုင်းန...
Windows7မှာ မသုံးစေချင်တဲ့ Software ဒီလိုပိတ်ထားမယ်.........။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Start >> run box မှာ gpedit.msc ဆိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ.....။ Enter ခေါက်ပြီးတာနဲ့ User Configuration >>...
ကျွန်တော် ဒီ post ကို တင်ရခြင်းအကြောင်းက မသိသေးသူများအတွက်လွယ်စေရန် နှင့် ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လည်းလွယ်တယ်လေ။ hos...
ဒီဇိုင်းပညာရပ်များကို ပြန်လည်မျှဝေနိုင်မည့် မြန်မာဒီဇိုင်နာဝေါလ်အမည်ရှိ ဝက်ဘ်ဆိုက်သစ် လွှင့်တင်.....။
ဒီဇိုင်း ပညာရပ် များကို ပြန်လည် မျှဝေ နိုင်မည့် မြန်မာ ဒီဇိုင်နာဝေါလ် အမည်ရှိ ဝက်ဘ်ဆိုက်သစ် လွှင့်တင် လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက...
မိမိ ရဲ့ နာမည် နဲ့ Logo လုပ်ခြင်း နှင့် ပုံလှလှလေးများ downloads လုပ်ခြင်း။
ကိုယ်ပိုင် နာမည်နဲ့ Logo လေးတွေလုပ်ချင်ရင်... သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့ Logo လေးတွေ၊ ပုံလေးတွေကို လုပ်ဖို့ လမ်းညွှန်ပေးပါရစေ။Logo တွေအပြင် ...
RECYCLE Virus ရှင်းလင်းနည်း...(၃)။
ကဲ သူငယ်ချင်းအပေါင်းတို့ရေ ဒီတစ်ခါတော့ RECYCLE Virus ရှင်းနည်း (၃)ကိုပြောပြသွားမှာပါ.....။ virus ဆိုတာကလည်းကွန်ပြုတာသုံးစွဲသူများကင်းဝေးလို...